Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo kulan gaar ah ka leh Soomaaliya – idalenews.com
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo kulan gaar ah ka leh Soomaaliya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa todobaadka soo socda kulan gaar ah ka leh Arrimaha Soomaaliya, kaasoo looga hadlayo marxaladihii u dambeeyay ee dalka iyo codsigii Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ee ahaa in dib u eegis lagu sameeyo cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya.
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha guud Qaramada Midoobey Augustine Mahiga ayaa sheegay in shirkan lagu falanqeyn doono xaaladihii u dambeeyay Soomaaliya, iyo sidii loo cusbooneysiin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Qaramada Midoobey.
Mahiga ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka baxday KMG, isla markaana wixii haatan ka dambeyn ay si toos ah calaaqaad u dhex mari doono, iyadoo la eegayo marxaladihii ay soo martay, iyo dadaalada hada socda horay loogu sii ambaqaado.
Waxaa uu sheegay in Qaramada Midoobey ay is bar bar taageyso dowladda Soomaaliya, isla markaana ay sii wadi doonto taageerada ay siiso.
Bishii Janaayo ayay aheyd markii Sarkaal sare oo ka socday Qaramada Midoobey uu booqday magaalada Muqdisho, si uu u eego xaalada Soomaaliya.
Golaha Ammaanka ayaa la filayaa inay ogolaadaan sidii loo qaadi lahaa xayiraada hubka ee saaran Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya ay codsatay in laga qaado cunaqabateynta Hubka ee la saaray Soomaaliya sanadkii 1991-dii.